Le ngqungquthela enemikhakha ehlukene eyaqala ukubanjwa yi-UKZN ngonyaka wezi-2011 ibihlelwe yiKolishi Lezifundo ZoMthetho NezokuPhatha futhi beyihanjelwe yizifundiswa ezevile kuma-60 ezivela emhlabeni wonke.
Izifundiswa zethule izinkulumo zazo ngaphansi kwesihloko esithi “ Akushintshwe ukuqalaza kwezomnotho , Ezamabhizinisi Nezokuphatha Emhlabeni oshintshayo”, izihloko zazo bezithinta ezamabhizinisi, ezokuqamba ubuchwepheshe, ukukhangisa nezomnotho okushayelwe ihlombe Iphini likaSekelashanselaweKolishi uSolwazi John Mubangizi othe lezi zinngxenye zibalulekile embonweni weNyuvesi.
‘Ngibonile ukuthi ezamabhizinisi zihamba phambili ohlelweni lwale Ngqungquthela. Lokhu kubalulekile kubuholi beKolishi ngoba iNyuvesi ibheke ukugqugquzela isiko lokusungula okusha, ezomnotho nezamabhizinisi. Nginesiqiniseko sokuthi kuzokwabelwanwa ulwazi oluningi olusha nezindlela ezinhle zokwenza izinto kanye nezixazululo ezingasiza ekubhekaneni nezinselelo ezibucayi ezithintene nezamabhizinisi nokuphatha enyakeni ozayo,’ usho kanje.
Ukuphepha kolwazi kube yingxenye okugxile kuyo inkulumo yosuku ebithulwa yiPhini LikaSekelashansela KwezoCwaningo uSolwazi Jonathan Blackledge ebisihloko esithi “ Ezamabhizinisi noHwebo Esikhathini Sobuchwepheshe: Ukuqondisisa Ngezokuphepha Kwezokuxhumana”.
UBlackledge ululeke ngokuthi izinto eziphathelene nokuphepha kolwazi kumele zaziwe yibo bonke abazimpilo zabo zithintwa yiloluhwebo. Uphinde wakhuluma ngombono wakhe ngekusasa lezocwaningo e-UKZN.
‘Enye yezimpokophelo eziphuthumayo zami ukwenza i-UKZN ibe yinyuvesi eyibhizinisi ukuze kugqugquzeleke ukuxhumana phakathi kweNyuvesi nabezamabhizinisi ngoba kumele sivale igebe phakathi kocwaningo olwenziwa eNyuvesi nomkhakha wezamabhizinisi,’usho kanje.
UMeluleki Oyisipesheli, Konobhala be-PRME, onguSolwazi WeNhlangano yeziZwe emkhakheni we-Global Compact uSolwazi Manuel Escuerdo wethule inkulumo yosuku ebisihloko esithi :” i-Global Compact ye-UN : Ukufundiswa kwezamaBhizinisi nezokuPhatha emhlabeni oshintshayo” lokhu kunike isithombe esibanzi sokuthi i-UKZN ingabakha kanjani ubudlelwane nge-PRME ukuze kwakheke ikusasa eliqhakazile.
Abebehambele ingqungquthela bavumelene ngokuthi kumele kube khona uphiko lwase-Afrika lwe-PRME futhi i-UKZN iyindawo ekahle kakhulu yokuhlela lomsebenzi ukuze kuhlanganiswe izindlela zokusungula nenqubekela phambili nocwaningo.
Abathule izinkulumo nabebebambe iqhaza bancome kakhulu abahlele le ngqungquthela nolwazi abaluthole kuyo.